Soo Dhaweyn Lala Ashqaraarey oo uu Nin Sucuudiyaan Ah u Sameeyey NinShaqaalihiisa Ahaa – Arrin yaab leh oo qabsatay baraha bulshada Khaliijka |
Nin Sucuudiyan ah, ayaa waxaa u shaqeeyaa nin u dhashay waddanka Pakistan. Ninkan ayaa ah darawalka reerka. Ninkan shaqaalaha ah, ayaa ah nin akhlaaq fiican, shaqada u jajaban, dhega-fudud isla markaasina tixgelin iyo ixtiraam leh. Carruurta reerka sidii shaqaale ula dhaqma e, sidii waalid oo kale ayuu ula dhaqmaa, oo uu ugu naxariistaa, qalbigoodana u ilaaliyaa. Ninkii Sucuudiyanka ahaa ninkaas aad buu u jeclaaday. Kolkaas buu heshiiskii shaqaaleynta dhawr jeer u siyaadiyey. Intaas keliya ma samayn e, xitaa mushaarkii ayuu u kordhiyey, isaga oo gaarsiiyey in uu saddex jeer u jibbaaro. Markii uu arkay wanaaggiisa, sida shaqaalihii ulama dhaqma e, sidii walaalkiis oo kale ayuu ka dhigtay.
Dhawr jeer buu ninkii shaqaalaha ahaa weydiistay fasax uu waddankiisii u aado ninkii uu u shaqeynayey, laakiin ninkii baa ku dhegay, oo jeclaystay in uu joogo, sababta oo ah, waxa uu ka cabsanayey in uu waayo ninkaan qiimaha leh. Qoyskiisa, ayuu u keenaa Sucuudiga, intii uu isagu aadi lahaa. Waa dambe ayaa ninkii shaqaalaha ahaa ku adkaystay in uu baxo, isaga oo u sheegey ninkii, in uu waddankiisii u hiloobay. Maantii dambe ayuu ‘yaa Allahu’ ku fasaxay. Shaqaalihii, maalintii uu baxayey, ninkii iyo qoyskii dhammaan ayaa sagoontiyey, isaga oo lacag badan iyo hadiyado badan loo sii dhiibay.
Bil ka dib, ayaa ninkii soo wacay ninkii madaxda u ahaa, waxa uuna u sheegey, in uu soo baxayo. Ninkii Sucudiyaanka ahaa waa farxay, oo farxay. Maalintii uu imaanayey magaalada Riyaad, ayaa ninkii Sucuudiyaanka ahaa waxa uu soo diyaariyey qoyskii, qaraabadiisii iyo saaxiibbadiis dhammaan. Waxaa kale oo uu sii kireeyey Hoteel weyn, in xaflad soo dhaweyn u sii diyaariyo.
Ninkii shaqaalaha ahaa, markii uu soo degey ba, waxaa uu arkay dad farabadan oo saf ugu jira, oo sidii madaxweyne la soo dhaweynayo. Waxaa isla markii ba ku soo booday ninkii uu u shaqeyn jiray, oo inta ku dhegey dhabbannada ka shumiyey, oo weliba cabbaar uu ka fuqi waayey. Waxaa kale oo ku soo ordey carruurtii uu ninkaasi dhalay oo ugu soo kala orday sidii carruur aabbahood uu sannado ka maqnaa oo yimid. Ninkii shaqaalaha ahaa, gaari qurux badan inta lagu soo kaxeeyey ayaa la geeyey Hoteel, xaflad si heer sare ah loogu agaasimey, halkaas baa Kackac uu magaciisu ku qornaa, isaga iyo maxadiisii ba wada jareen.
Ninkii shaqaalaha ahaa, ayaa hadal lagu soo dhaweeyey, laakiin inta is hayn waayey, jacaylka loo muujiyey darteed, ilmo maashaysay, kolkaas buu xafladdii ka hadli waayey qiiro-ilmo darteed. Inta soo booday ayuu isku duubay ninkii madaxada u ahaa, oo uu cabbaar ka fuqi waayey, kolkaas baa isaga oo illini ka socoto, waxaa lagu qaaday gaarigii, waxaana loo kaxeeyey hoygiisii.
Tags: Soo Dhaweyn Lala Ashqaraarey oo uu Nin Sucuudiyaan Ah u Sameeyey NinShaqaalihiisa Ahaa - Arrin yaab leh oo qabsatay baraha bulshada Khaliijka
Next post Dhibka uu Faysbuuggu u Geystay Saaxibo Isjeclaa - Bal arag gartii ugu yaabka badnayd ee aan naqay!
Previous post Laba Nin oo Walaala ah oo Muddo 26 Sano ah Aan Wada Hadlin oo Si Kasta Inta La yeelay La heshiisiin Waayey - Bal eeg sababta keentay khilaafka gaammuray ee labadaas nin